Nagu saabsan - Suzhou Tianhongyi wiishka Technology Co., Ltd.
Suzhou Tianhongyi Elevator Technology Co., Ltd. wuxuu ku yaal Zhangjiagang City, Suzhou, oo ku xigta Shanghai dhanka bari, Wabiga Yangtze ee waqooyiga, iyo Suzhou iyo Wuxi oo koonfurta ah. Waa shirkad ku takhasustay R&D, naqshadeynta, waxsoosaarka, iibinta, saadka iyo A casriyeynta adeegyada isdhexgalka.
Iskudar ilaha qeybaha wiishashka iyo wiishashka iyada oo loo marayo qaab ganacsi oo iskaashi ah, siiya macaamiisha xal hal-joogsi ah si loo abuuro qiime sare.
Alaabtayada waxaa ka mid ah wiishashka rakaabka, wiishashka villa, wiishashka xamuulka, wiishashka daawashada, wiishashka isbitaalka, kor -u -qaadeyaasha, socod -socodka, iwm.
Hadafkayaga ugu dambeeya ayaa ah inaan daboolo baahiyaha macaamiisha caalamka. Waxaan sii wadi doonnaa inaan si adag u shaqeyno si aan u soo bandhigno ruuxa hal -abuurka leh ee “xirfadda leh oo u heellan”.
Alaabooyinkayaga waxaa ka mid ah wiishashka rakaabka, wiishashka villa, wiishashka xamuulka, wiishashka indho -indhaynta, wiishashka isbitaalka, kor -u -qaadayaasha, socodka socodka, iwm, oo lagu qalabeeyay qaybaha wiishka oo dhammaystiran, iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyadda koontaroolka ugu dambeysa iyo nidaamka wadista, si isku darka tayada iyo qiimaha , badeecadaha Ugu iibinta badan in ka badan 30 dal iyo gobollada adduunka oo dhan. Tan iyo markii la aasaasay, shirkaddu waxay had iyo jeer ka go'an tahay inay siiso macaamiil adduunka oo dhan aamin, la isku halleyn karo, oo raaxo leh. Waxay u hoggaansan tahay fikradda ku-tiirsanaanta macaamilka, tayada ayaa ku guuleysata suuqa, iyo wada-shaqeynta guuleysiga. Mashruuca adeegga caalamiga ah oo leh qalab dhammaystiran ayaa ku guuleystay dareenka macaamiisha.
Yoolkeena ugu dambeeya
Hadafkayaga ugu dambeeya ayaa ah inaan daboolo baahiyaha macaamiisha caalamka. Waxaan sii wadi doonnaa inaan si adag u shaqeyno si aan qof walba ugu soo bandhigno "xirfadle ah oo u heellan" ruuxa hal -abuurka ah iyo badeecado iyo adeegyo kaamil ah qof walba.
Tianhongyi Elevator wuxuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo la -hawlgalayaasha caalamiga ah si loo abuuro mustaqbal isku habboon oo qurux badan. !
"Hor -istaagga suuqa iyo bixinta adeeg wanaagsan"
Tianhongyi Elevator wuxuu hirgeliyaa istiraatiijiyadda astaanta adeegga, wuxuu fuliyaa mashaariicda adeegga jihooyinka oo dhan, wuxuu siiyaa macaamiisha adeegyo hufan oo degdeg ah waqti kasta, wuxuu ku taliyaa badeecadaha buuxiya shuruudaha, kor u qaada isgaarsiinta iyo is -weydaarsiga macaamiisha, wuxuuna ka dhigaa Wax welwel ah marka la dooranayo alaabta.